I Besakana, trano fonenan' Andranjaka ao amin' ny Rovan' Antananarivo
Andrianjaka dia mpanjaka tao amin' ny Fanjakana Merina izay nanapaka tamin' ny taona 1610-1630. Zanaka lahin' ny mpanjaka Ralambo izy. Vitany ny fanitarana ny fanjakana natombok' ireo mpanjaka teo alohany ka tao Analamanga, izay novana anarana hoe Antananarivo, no nataony renivohitry ny fanjakany. Nandry fahalemanana kokoa ny tany tamin' ny fitondrany ka nahavitana asa lehibe toy ny fitarihan-drano hanajariana ny honahonan' i Betsimitatatra izay nanodidina an' Antananarivo, mba hanaovana tanimbary.
Fandovana fanjakana[hanova | hanova ny fango]
Ny lovantsofina dia mitàna fa nanaovan-dRalambo fitsapana Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka, ny amin' izay handimby azy. Nody nanao narary hono Ralambo ary mody nanao hoe tamy hanafika azy ny fahavalo. Ireo zana-dRalambo hafa rehetra anefa dia tsy mba nanaovana io fitsapana io. Misy nilaza moa fa Andriantompokoindrindra dia mbola niezaka nanao fanorona aloha vao hamonjy ny haikan-drainy, ka hoy izy mantsy ny irak' Andriana: "izaho mbola hamono ny telo noho ny dimy" satria fantany hono fa hevi-petsin-drainy izany. Ka noho io valinteny io dia Andrianjaka, izay tsy nahalany vary sy tsy naharay lamba fa avy hatrany dia tonga teo Ambohidrabiby, no nofidian-dRalambo handimby azy.
Misy kosa lovantsofina milaza fa tena nanjaka nandimby an-dRalambo mihitsy Andriantompokoindrindra fa tato aoriana vao nomeny an' Andrianjaka zandriny ny fanjakana noho ny fitiavany an' io zandriny io sy rehefa nanao fifanarahana izy roalahy.
Ny fasan' Andrianjaka (ny Tranofitomiandalana na Fitomiandalana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrianjaka&oldid=1009647"
Voaova farany tamin'ny 15 Martsa 2021 amin'ny 08:13 ity pejy ity.